Jeremia 2: 1-37
Jeremia 1 Jeremia 2 Jeremia 3
Mandehana, ka miantsoa eo anatrehan'i Jerosalema hoe: Izao no lazain'i Jehovah: Tsaroako ny niraiketan'ny fonao tamiko, fony hianao mbola tanora, Sy ny fitiavanao, fony hianao vao nampakarina. Dia ilay nanarahanao Ahy tany an-efitra, Teny amin'ny tany tsy mbola nifafy zavatra;
Mihainoa ny tenin'i Jehovah, ry taranak'i Jakoba, Sy hianareo, ry fokony rehetra amin'ny taranak'Isiraely!
Ary izy tsy nanao hoe: Aiza Jehovah Izay nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egypta Sady nitarika antsika tany an-efitra, Dia ilay tany foana sady be lavaka, Tany karankaina sady aloky ny fahafatesana; Tany izay tsy mba nalehan'olona akory na nonenan'olona?
Ary nitondra anareo niditra ho any amin'ny tany mahavokatra Aho, Mba hihinananareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy; Kanjo nony tafiditra hianareo, dia nolotoinareo ny taniko, Sady novetavetainareo ny lovako.
Ny mpisorona tsy nanao hoe: Aiza Jehovah? Ary ny mpiadidy ny lalàna tsy nahalala Ahy; Ny mpitondra[Heb. mpiandry ondry.] koa nanota tamiko, Ary ny mpaminany naminany tamin'ny anaran'i Bala Ka nanaraka ireny tsy mahasoa.
Moa efa nisy firenena nanova ny andriamaniny va? Nefa ireny dia tsy Andriamanitra akory. Fa ny oloko kosa efa nanakalo ny voninahiny tamin'ireny tsy mahasoa ireny.
Talanjôna amin'izany, ry lanitra! Ary matahora, ka mangorohoroa indrindra, hianareo! hoy Jehovah;
Ny mponina tao Memfisa[Heb. Nofa.] sy Tapanesa aza Efa nampangadihady ny tampon-dohanao.
Moa tsy ny nahafoizanao an'i Jehovah Andriamanitrao Tamin'ny andro nitondrany anao teny an-dàlana va No nahatonga izany taminao?
Koa inona no anton'ny ankanesanao amin'ny làlana mankany Egypta Hisotro ny ranon'i Sihora?[Neily.] Ary inona no anton'ny ankanesanao amin'ny làlana mankany Asyria Hisotro ny rano amin'ny Ony?[Eofrata.]
Fa hatramin'ny ela no efa nanapahanao ny zioga taminao Sy efa nanitosanao ny fatoranao, Ka hoy hianao: Tsy hety hanompo aho; Nefa teny amin'ny havoana andrandraina Sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra No nandrianao nijangajanganao.
Fa izaho namboly anao ho karazam-boaloboka tsara indrindra, Dia rantsana tsara avokoa; Ka ahoana no nanjary sampany ratsy hianao Ho voaloboka hafa?
Fa na dia misasa sirahazo aza hianao Ka maka lavenona betsaka hanadiovana anao, Ny helokao dia mbola voasoratra[Na: maloto.] eo anatrehako ihany, Hoy Jehovah Tompo.
Ahoana no anaovanao hoe: Tsy nanao izay nahaloto ahy aho, Tsy nanaraka ireo Bala aho? Hevero ny nalehanao teny amin'ilay lohasaha, Fantaro izay nataonao, Ry ramevavavy haingam-pandeha mivezivezy amin'ny alehany,
Sy ry boriki-vavy dia tamàna any an-efitra, Izay manimbolo ny rivotra noho ny faniriany; Ary ny fahamaizinany -- iza no mahasakana azy? Izay rehetra mitady azy dia tsy ho sasa-poana; Fa amin'ny volany no hahitany azy.
Aza esorina ny kapa amin'ny tongotrao; Ary aoka tsy ho maina ny tendanao; Nefa hoy hianao: Tsy misy fanantenana; Tsia! fa ny hala no tiako, Ka dia hanaraka azy aho.
Dia izay manao amin'ny tapakazo hoe: Raiko hianao, Ary amin'ny vato hoe: Hianao no niteraka ahy; Fa efa niamboho Ahy izy ka tsy nanatrika Ahy; Nefa amin'ny andro fahoriany kosa dia vao hanao hoe izy: Mitsangàna, ka vonjeo izahay.
Fa aiza ireny andriamanitrao izay nataonao ho anao? Aoka hitsangana ireny, raha mahavonjy anao amin'ny andro fahorianao; Fa araka ny isan'ny tanànanao, ry Joda, no isan'ny andriamanitrao.
Nahoana no efa mifandahatra amiko hianareo? Fa samy efa niodina tamiko hianareo rehetra, hoy Jehovah.
Foana ny namelezako ny zanakareo, fa tsy zaka nanarina izy; Ny sabatrareo nandringana[Heb. nihinana.] ny mpaminaninareo, Toy ny liona mamiravira.
Ry taranaka, dinihonareo ny tenin'i Jehovah! Moa efa nanjary tany efitra ho an'ny Isiraely va Aho, Na tany maizim-pito?[Na: tany misy aizim-pito avy amin'i Jehovah.] Nahoana ny oloko no manao hoe: Afaka mikarenjy izahay Ka tsy hankany aminao intsony?
Kanto izany fandehanao hitady fitia izany, Ka zarinao ho amin'ny ratsy ny dianao![Na: Ka na dia ny vehivavy ratsy fanahy aza dia ampianarinao ny fombanao.]
Nefa hoy hianao: Tsy manan-tsiny aho, Efa afaka amiko tokoa ny fahatezerany, Indro, hifandahatra aminao Aho Noho ny anaovanao hoe: Tsy nanota aho.
Nahoana hianao no maika hanova ny alehanao? Fa ho menatra noho ny amin'i Egypta koa hianao, Toy ny nahamenaranao noho ny amin'i Asyria.
Izany koa dia hialanao, ka hiloloha tànana hianao; Fa nolavin'i Jehovah ny tokinao, Ka tsy hambinina amin'ireo hianao.